💖 I-Lux Midtown Penthouse w/ Rooftop Deck ⚡Internet
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nomad
Leli fulethi elinegumbi elilodwa elikhanyayo lilungele ukuphumula, likhuphuka nje ngomgwaqo osuka enkabeni yedolobha. Eduze kwezindawo zokudlela nezitolo kanye nokubuka endaweni ebangeni lokuhamba ngezinyawo, kanye nenkaba yedolobha .Indawo ekahle yokuhlala ekahle kakhulu futhi kulula ukuhamba.
Eduze kwakho konke iDowntown Detroit okufanele ikunikeze i-Little Caesars Arena, Ford Field, Comerica Park, Fox Theatre, Wayne State, futhi kufanele ivakashele izindawo zokudlela namabha.
Ngena: 3:00 PM
Ukuphuma: 11:00 AM
Wonke umuntu ubiza iDetroit njengokuthile okuhlukile njengoba le ndawo enhle empeleni isho okwehlukile kuwo wonke umuntu ovakashelayo.
Izivakashi ezingu- 4 · amakamelo okulala 4 · Igumbi lokugeza elihlanganyelwayo eliyi-1.
- Umbhede ka-Queen kaCasper
- Umatilasi we-Queen air
- Umata waphansi owugqinsi
- Pakisha bese udlala
Uzojabulela amalineni ahlanzekile, umbhede kanokusho, ukugeza okugcwele, i-Fiber esheshayo ye-inthanethi, izinketho ze-tv zokusakaza-bukhoma, ikhishi eligcwele elinazo zonke izinto ezilungiswayo, i-ayina nebhodi loku-ayina, isomisi sezinwele, nezinsiza zokuhlala ongasoze wakhohlwa.
Qaphela: Ikhaya lethu lisendaweni yesi-5. Ikheshi lebhilidi liya esitezi sesi-4 bese ukhuphuka isethi yezitebhisi uye esitezi sesi-5.
4.94(186 okushiwo abanye)
4.94 · 186 okushiwo abanye
Indawo yethu yaseMidtown Detroit isenkabeni yezindawo zokudlela nezitolo ezisezingeni eliphezulu. Blocks from Shinola, Jolly Pumpkin, Selden Standard, 3rd Man Records, Grey Ghost, Great Lake Coffee, Motor City Brewing Works, Traffic Jam kanye Snug, nokunye okuningi!
Silapha ngenxa yakho. Xhumana nethimba lethu lezivakashi ngokusebenzisa imiyalezo ye-Airbnb engu-24x7.
UNomad Ungumbungazi ovelele